Umphuhlisi utyhila ulwazi ngakumbi malunga neKhayaPod | Ndisuka mac
Umphuhlisi utyhila ngakumbi malunga neKhayaPod
Isithethi esili-Apple sesinye sezixhobo ezilindelwe ngabasebenzisi. I-HomePod-yindlela abayibiza ngayo ngegama likaCupertino- yimpendulo ka-Apple kwiAmazon kunye neAmazon Echo yayo. Ngexesha kweyoMnga ezayo kulindelwe izinto ezimbini ezibalulekileyo: Kwelinye icala iMac Pro nakwelinye iKhaya laseKhaya.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo i-firmware yamva nje yakhutshelwa abaphuhlisi kwaye basebenze ngaphambi kokumiliselwa kwesithethi kunye noSiri. Kwaye omnye waba baphuhlisi utyhile ulwazi oluthe kratya malunga nento esinokuyilindela kule KhayaPod. Igama lomphuhlisi ngu Guilherme rambo. Phakathi kwedatha efunyenweyo izandi ezintsha zityhilwe esinokukuva kwisithethi esikrelekrele. Nantsi ividiyo encinci ethunyelwe kwi-Twitter ngumfumanisi wayo.
Izandi ze-iOS 11.2 zePod Home pic.twitter.com/kZrrCheyIu
-UGuilherme Rambo (@_inside) 31 Oktobha ka-2017
Kodwa masiqale ekuqaleni. Lo mphuhlisi usishiyile imikhondo malunga Singenza ntoni nge-Apple smart speaker. Kwaye ezinye zezi datha zinomdla zezi: singasitshintsha isandi sealam ngokudlala ingoma kwinkonzo yeApple Music.
Kwelinye icala, ukuba ungomnye wabo baya kuba neePod Home ezininzi ekhaya, kuya kufuneka uyazi ukuba ungahlaziya ifayile ye firmware Zonke zazo ngaxeshanye. Kwakhona, ukuba nePodPod engaphezulu kwesinye ekhaya, inokusetyenziswa njengezithethi zestereo. Ngapha koko, ngokwomphuhlisi xa sixhuma ikhompyuter yesibini kwinethiwekhi yasekhaya, siya kucelwa ukuba sifuna ukuyilungisa ngendlela enjalo.
Okwangoku, iingoma ezidlalwa kwisithethi esi-smart ziya kuvumela umsebenzisi ukuba zongezwa kwiprofayile yabo okanye hayi. Okokugqibela, ngokuka isoftwe Iphehlelelwe ngu-Apple, ikwatyhile oko umsebenzisi uya kuba nakho ukulawula kwi-iPhone okanye kwi-iPad usetyenziso olunje ngeMiyalezo, amaNqaku okanye uLuhlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umphuhlisi utyhila ngakumbi malunga neKhayaPod
Iinkonzo zinika iApple ingeniso engaphezulu kuneemveliso zayo
Umqondiso uvula i-encrypted app ye-Mac